Kuchengetedza Zvibvumirano zveMabhizinesi muIUAE | Amal Khamis Vamiriri nevanoona nezveMutemo
Kuchengetedza Zvibvumirano zveMabhizinesi muIUAE
Retainer Services Kune Makambani muIUAE
zvibvumirano zvekuchengetedza zvemabhizinesi
Chibvumirano chekuchengetedza chakasarudzika munhandare yebhizinesi nekuti iwe unobhadharwa pamberi pebasa iwe uchiri kuendesa. Izvi zvakasiyana nezvinowanzo kuwanikwa mukutengeserana kwebhizimusi, kwaunofanira kuendesa usati wabhadharwa.
Chibvumirano chekuchengetedza chinobatsira zvakanyanya, kunyanya kune vanozvimiririra vane hupenyu hwekushanda hwavanowanzo rarama ne pendulum inofamba pakati pe "mabiko kana nzara". Pano pane basa rakawanda panguva kana kushomeka kwaro. Kuva nechibvumirano chekuchengetedza nevatengi kunobatsira kupa freelancer nekudzikama kwemari uku uchipawo mukana wakaringana wekuvaka yake portfolio.
Pamusoro pezvo, kuva nechibvumirano chekuchengetedza kana zvimwe pane yako portfolio zvinopa chinzvimbo che'unyanzvi '. Izvi zvinodaro nekuti chibvumirano chekuchengetedza chinokonzeresa kuti vangangove vatengi kuti vakuone sehunyanzvi uye uine kukosha kwakawanda kuvapa. "Ndiri kureva, (s) haaigona kunge aine chibvumirano chekuchengetedza nemunhu kana (s) aisaziva zvaari" zvaari, anodaro mutengi anogona.
Nepo chibvumirano chekuchengetedza chiri chinhu chinokosheswa kune freelancer, cherekedza kuti hachishandire ma freelancers chete asi kune chero chero munhu webhizinesi anotarisa kudzikamisa kubuda kwavo kwemari. Izvi zvakati, zvakakosha kuti unzwisise kuti chibvumirano chekuchengetedza chii uye kuti ungachiishandisa sei kuita zvakakosha kubhizinesi rako. KuAmal Khamis Advocates uye Vanoona nezveMutemo, isu tinopa Retainer masevhisi emakambani uye mabhizinesi muAFA.
Chii chinonzi chibvumirano chekuchengetedza?
Chibvumirano chekuchengetedza chibvumirano chibvumirano pakati pevanozvimiririra nevatengi vavo chinochengeta masevhisi evanozvipira kwenguva yakareba uye chinopa freelancer purogiramu yakafanira yekubhadhara. Chibvumirano chekuchengetedza chakasiyana nemamwe marudzi emakondirakiti kana emhando dzemitengo nekuti mutengi anobhadhara pamberi pamasevhisi ako. Dzimwe nguva, iyo chaiyo sevhisi yebasa haina kunyatso tsanangurwa. Nekudaro, iwo masevhisi akafukidzwa mune chiyero cheiyo template yebasa yawakaita kuti iwanikwe kwavari.
Kunze kwehunhu hwebasa raunotarisirwa kupa, chibvumirano chekuchengetedza chinoratidzirawo zvisungo zvakasiyana kune ese mapato uye zvinotarisirwa kubva kumativi ese. Izvi zvinogona kusanganisira misimboti yebasa, mari yekuchengeta, nzira dzekutaurirana, uye mimwe mitemo yepasi yehunyanzvi.
Nei chibvumirano chekuchengetedza chakakodzera bhizinesi rako?
Mabhizinesi, kunyanya avo vari muindasitiri yebasa, vari kutanga kuvimba zvakanyanya pazvibvumirano zvekuchengetedza. Iyo ine yakawanda mabhenefiti ayo ane ruzivo bhizinesi munhu asingakwanise kutarisa maziso. Aya mabhenefiti haashande kune iye anopa rubatsiro chete asi kune vese vanopa rubatsiro uye vatengi vavo. Mamwe acho ndeaya:
Chirongwa chekuchengetedza chibvumirano chinoona kuti mupi webasa, freelancer, mune ino kesi, achabhadharwa achienderera. Nekuvimbika kwemari pakupera kwemwedzi, mupi webasa anogona kutarisa zvakanyanya pane zvavanoda nevatengi uye nenyaya uye nekupa basa remhando yepamusoro. Izvi zvinoitika kwete nekuda kwekuti freelancer anovimbiswa mari pakupera kwemwedzi asi zvakare nekuti pane kushandisa nguva kutsvaga vatsva vanobhadhara vatengi, freelancer anogona kupa iyo nguva kune akachengetedzwa mutengi.
Vatengi vanobatsirwawo nehurongwa hwekuti ivo vanovimbiswa nezvekuwanikwa kwevanovapa. Zvakare, zvibvumirano zvekuchengetedza zvine nzira yekugadzirisa mashandiro ebasa, zvichikonzera mhindu iri nani kune vatengi uye, pakupedzisira, mupi webasa. Hukama hwe freelancer nevatengi pachibvumirano chekuchengetedza chinowanzo kuve chakadzama uye chinogutsa kupfuura vatengi venguva dzose. Izvi zvinokodzera chikamu chekuwedzera kwenguva yakafanira mapato ese ari maviri ekushandira pamwe uye nemukana iwoyo nguva inopa mukana wega wega kunatsa kusagadzikana kwehukama.
Kuvimbika kwechibvumirano chekuchengetedza kunoita kuti freelancer kufungidzira kunyatsoyerera kwemari nenguva, nekudaro ichipa kujekesa kuri nani uye, nguva dzose, chimiro chiri nani chebhizinesi. Nekudzikama kwemari kuyerera, ma freelancers anokwanisa zvirinani kubata mari iyo yavo bhizinesi inokwezva.
Izvo Zvisiri-Saka-Zvikuru zvikamu zvechengetedzo zvibvumirano
Sezvinoshamisa sekuchengetedzwa kwezvibvumirano kunonzwika kubva kune mutengi maonero uye iyo freelancer maonero, hazvisi pasina zvinokanganisa. Kunyangwe vamwe vangati mabhenefiti ayo anodarika zvikanganiso zvawo, zvakakosha kuti uzive zvese zviripo usati wasarudza chibvumirano chekuchengetedza. Zvimwe zvezvipingamupinyi ndeizvi:
● Kuzvivharira mukati
Kune vakawanda vanozvimiririra, sarudzo yekuva ma freelancers yakaitwa nekuti ivo vaida kuve ivo vanoona nezve mashandisiro avanoshandisa nguva yavo - kusanganisira kuti voshanda naani nenguva uye nebasa ripi rinenge richiitwa.
Nechibvumirano chekuchengetedza, imwe yeiyo "rusununguko" inotorwa nekuti unozvisunga iwe kumutengi wako kune yakatarwa maawa. Maawa iwayo haachisiri ako, uye chero zvaungadai uchiita nenguva iyoyo hazvichakwanisika.
● Kurasa mari
Kubva pamaonero evatengi, unoisa njodzi yeku "kushandisa mari yausingade kushandisa". Izvi zvinodaro nekuti panogona kunge paine dzimwe nguva iwe pausingade rubatsiro rwemubatsiri wako kana freelancer, asi nekuda kwechibvumirano chekuchengetedza pakati pemativi ese, unosungirwa kubhadhara munhu wacho.
Nechikonzero ichi, mapato maviri anofanirwa kutsanangura zvavanosungirwa uye zvavanotarisira pavanenge vachinyora chibvumirano chekuchengetedza uye vochiongorora zvakanaka kuti vaone kuti vagadzikana nechibvumirano. Ukangosaina mitsara ine madota, iwe wakasungwa zviri pamutemo, uye kutsauka pane zvinodiwa nechibvumirano kunogona kukuita kuti uve nemhosva kumatare.
Mhando dzekuchengetedza zvibvumirano
Nepo chero bhizinesi chero ripi zvaro richigona kubatsirwa nezvibvumirano zvekuchengetedza, iyo pfungwa yevanochengeta inonyanya kugamuchirwa nevekubvunza mafemu, mahara, uye mabasa epamutemo. Izvi zvataura, kune maviri akakosha marudzi ezvibvumirano zvekuchengetedza izvo mabhizinesi ataurwa pamusoro apa anogona kubatsirwa nawo.
Zvibvumirano zvekuchengetedza kubhadhara basa rakaitwa
Zvibvumirano zvekuchengetedza zvekubhadhara kuti uwane mukana kumupi webasa kana chipangamazano
Zvibvumirano zvekuchengetedza zvichibhadhara basa raitwa
Nemhando iyi yechibatiso chekuchengetedza, mupi webasa kana mupi wezano anobhadharwa pabasa ravo remwedzi. Izvo hazvina kumbosiyana nebasa rinowanzoitwa nevanozvimiririra, kunze kwekunge sewe mupi webasa pane chengetedzo, unovimbiswa nezve rimwe basa rinouya nenzira yako kubva kune iye mutengi uye nguva dzose, imwe mari.
Iyi sarudzo inogona kuve yakanakira kune freelancer ichingopinda munhandare yezvibvumirano zvekuchengetedza nevatengi. Ehezve, izvi zvakare zvinoenderana nerudzi rwebasa iro freelancer raizopa.
Zvibvumirano zvekuchengetedza zvichibhadhara kuwana
Iyi sarudzo ndeye yekutanga uye inongowanikwa chete kune vanopa masevhisi vakawana chinodikanwa che 'nyanzvi' kana 'chiremera mumunda wavo wavakasarudza. Mune ino modhi, chipangamazano haadi kuverenga basa rakaitwa kuti abhadharwe. Pane kudaro, kungori kwekuti ivo varipo kune mutengi kwakaringana kuti vabhadharwe, kunyangwe kana vasingashandise masevhisi avo kanopfuura kamwe kana kaviri pamwedzi.
The pay-yeku-kuwana modhi zvinoshamisa zvinowedzera kukosha kweanopa sevhisi nekuti zvinoratidza kuti mutengi anoona basa rako rakasarudzika zvakakwana kuti urambe uchibhadhara iwe kuti usvike kwavari pane kuti titaure newe.
Zvibvumirano zvekuchengetedza muUAE
Zvirongwa zvekuchengetedza ndiyo kiyi yekubudirira kwenguva refu nekusimudzira kwebhizimusi chero ripi zvaro. Zvibvumirano zvekuchengetedza zvibvumirano zvibvumirano zvinotsanangudza mamiriro ehukama hwako negweta rako. Iyi inzira yakachengeteka uye isingadhuri yekuwana masevhisi epamutemo uye kuronga ramangwana.
Kumahofisi e Amal Khamis Vamiriri nevanoona nezveMutemo, isu tinokupa iwe akasiyana siyana masevhisi, kusanganisira kunyora ako ekuchengetedza zvibvumirano zvako. Nekuti nyika yebhizinesi inogara iri mukufashukira nekuda kwezvinhu zvitsva zvinomuka zuva rega rega, zvakakosha kuti uve nezvibvumirano zvekuchengetedza zvinoratidzira kuyerera kwenguva. Iwe uchawana zvese izvo nezvimwe apo iwe paunotiroja isu kuti uve gweta rako. Tambanudzira kwatiri nhasi, uye ngatitangei.